06 Jul, 2014 - 06:07	 2014-07-06T06:01:02+00:00 2014-07-06T06:01:02+00:00 0 Views
VAVERENGI tinoda kuti mufembere, mutiudze kuti munhu uyu, uyo anova muimbi ane mukurumbira mukuru, ndiani.
Ndinokubairai zanhi ndichiti muimbi iyeyu akambokumba mibairo mubasa rake. Musapfuurwe neKwayedza resvondo rinouya kuti muzive kuti uyu ndiani.
Tumirai mhinduro dzenyu panhamba dzinoti +263 714 200 007. – MUPEPETI.
MUIMBI ari kupisa mazuva ano, Cynthia Mare (kurudyi) achigashidza Isabel Chinodakufa wekuChitungwiza CD rake idzva kumahofisi eKwayedza nemusi weChipiri svondo rino. Chinodakufa ndemumwe wevaverengi veKwayedza vakakwanisa kufembera pakaburitswa mufananidzo waMare pachikamu cheFembera Fembera Tione svondo rapera pamberi ndokuhwinha maCD emuimbi uyu. – Mufananidzo: Memory Mangombe